Clickfunnels Trial enwetshiwe - Funnel Of The Day
Clickfunnels iyona #1 okuholela isevisi ukudala amawebhusayithi ngenhloso yokumaketha kanye nezinsizakalo ukuthengisa usebenzisa funnels ukwandisa umthamo nokuzibandakanya.
Njengoba iyiphi enye inkampani, Clickfunnels unesithakazelo ngokuletha ku amakhasimende amasha nsuku zonke ukusebenzisa isofthiwe yabo futhi ukuthi lokho kwenzeke bewakha flash yokuthengisa ukunikela nezikhathi ezinde isilingo sabo samahhala.
Clickfunnels enwetshiwe Isivivinyo Ukuthengiswa ngezikhathi ezithile ezingavamile ngokwemvelo kodwa ziyenzeka.
Kuyasiza ukwakha ubuhlobo kangcono namakhasimende amasha futhi kubenza bakwazi ukuhlola zonke izinzuzo yesikhulumi ngendlela olunzulu.
Isikhathi enwetshiwe njalo alinikwa lapho iqoqo okusheshayo idatha kusuka izmhiaka futhi konke sekulungile ngemva kwalokho.